Tontolo Arabo: Fa inona no andrasan’i Arabo? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2009 6:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, عربي, Español, English
Mpitoraka blaogy roa avy amin'ny lafin-tany arabo roa samihafa no mikamenona amin'ny zavatra iainan'ireo arabo, manomboka any amin'ny Ranomasimbe ka hatrany amin'ny Gôlfa . Ny iray manontany hoe mandra-pahoviana isika no hipetraka ho mpitazana fotsiny foana raha ny firenen-kafa kosa miezaka mampanaraka ny teotr'andro sy mampivoatra ny tahirim-pitaovam-piadiana eo am-pelatanany – ary ny iray hafa indray manao hoe nahoana i Arabia Saodita no tsy mba manana ny tetikasany manokana momba ny any ambony tsy taka-maso any
Bilad Talisman [Ar] mpitoraka blaogy Algeriana iray no manontany tena hoe nahoana ny Arabo no mpitazam-potsiny amin'ny adin'ny balafomanga mahataka-davitra [missiles”] misy ankehitriny:
Mipetraka tsara tokoa ny Arabo manomboka eo amin'ny Ranomasimbe Atlantika ka hatrany amin'ny Gôlfa, mampiasa ny volany amin'ny cabarets, any Alzeria sy ireo firenena hafa eran'izao tontolo izao. Amin'izao androntsika izao, ny Arabo dia mijery ny adinà balafomanga ifanaovan'ny Koreana, tsy misy hafa amin'izy ireo nipetraka tsara tambonin'ny seza, nijery tao amin'ny Al Jazeera ny balafomanga Israeliana nampiasaina tao Gaza sy tahaka ny nipetrahany, talohan'izany, nijery ny balafomanga Israeliana niraraka toy ny ranon'orana tao Libanona nandritry ny lohataonan'ny 2006. Tsy noraharahainy izay baomba nalefan'ny Hizbulla hitontona tany Israely. Mbola hipetraka hijery manoloana ny fahitalavitra Al Jazeera ihany koa ny Arabo indray andro any hijery ny fianjeran'ny balafomanga iraniana any Koweit, Riyadh, Oman sy ny hafa. Izany ny Arabo izany. Mipetraka ry zareo, sahala amin'ireny mpanatrika lanonana mahalala fomba ireny, manaraka tsara ny adinà balafomanga, tsy mihetsiketsika.
Avy any Arabia Saodita, i American Bedu, Amerikana vavy manambady Saodiana, dia manontany hoe nahoana i Arabia Saodita no tsy mba nirotsaka tamin'ny tetikasany manokana momba ny habakabaka:
Lasa saina aho hoe nahoana no firenena manan-karena toa an'i Arabia Saodita no tsy misafidy hanana ny tetikasany manokana momba ny habakabaka, toy izay hiankin-doha lava sy hanao fifanarahana amin'ireo mpiara-dia? Hatramin'ny anio, Saodiana tokana monja no mba nandeha tany an'habakabaka tany, Sultan bin Salman bin Abdulaziz al Saud.
Raha izany, nahoana hoy ianao i Arabia Saodita, na eo aza ireo harem-beny ny fahaiza-manaony, no mifidy tsy hanana tetikasa manokana momba ny habakabaka ho azy manokana? Nanontany Saodiana iray aho momba ity zavatra ity. Toy izao no navaliny “Ny mitondra fiara eny an-dalam-be aza mbola tsy hain'ny Saodiana maro, ka fomba ahoana no hieritreretanao hivezivezeny any ambony tsy taka-maso any?” ( mazava loatra fa tamin'ny fomba niharo vazivazy no nilazana izany saingy mampisaina kosa…)